Home » Vaovao momba ny dia an-kolontsaina » "Tsy mila tampon-trano ny zavakanto" ao Vilnius
Vilnius renivohitra Litoanianina dia nahita vahaolana vaovao hafa ihany koa ho an'ny fiainana ara-tsosialy sy kolontsaina taorian'ny valan'aretina. Ny tanàna dia namadika ny afovoany ho "Art Needs No Roof" goavambe amin'ny fampiasana takelaka fanaovana fampirantiana ho an'ny mpanakanto litoanianina 100.
"Na dia efa misokatra aza ny galeran'ny zavakanto, dia mijanona eo ihany ny fameperana amin'ny fiaraha-mikorana", hoy i Remigijus Šimašius, ben'ny tanànan'i Vilnius. “Noho izany, Vilnius“ nanala ny tampon-trano ”. Namboarinay ho toy ny galerie malalaka malalaka ny afovoan-tanàna. Iray amin'ireo fampirantiana zavakanto lehibe indrindra ao Vilnius misy ireo sanganasan'ny mpanakanto 100 ity. Manantena izahay fa handrisika ny famoronana izany tetikasa izany ary hahita sanganasa hiditra ao an-tranon'olona ny asa sasany. ”
Ny Quarantine, izay naharitra telo volana tany Litoania, dia mafy tamin'ny mpanakanto teo an-toerana, satria nikatona ny galeria, ary hetsika sy fampirantiana iraisam-pirenena maro no nofoanana. Noho izany dia namina hevitra ny tanàna hanasana ireo mpanakanto hampiharihary maimaim-poana ny sangan'asan'izy ireo ao an-tanàna, ny vola lany rehetra dia arotsaka ao an-tanàna sy ilay mpandraharaha fanaovana dokambarotra ivelany «JCDecaux Lietuva».
Anisan'ireo mpanoratra ny mpanakanto fanta-daza iraisam-pirenena, toa an-dry Vilmantas Marcinkevičius, Vytenis Jankūnas, Laisvydė Šalčiūtė, Svajonė ary Paulius Stanikas (SetP Stanikas), ary koa Algis Kriščiūnas ary Živilė Žvėrūna - mpanakanto mahaliana, fanta-daza amin'ny haitao nomerika, mythivilė Žvėrūna fampandrosoana ny fanahin'olombelona.
"Ny quarantine dia fotoana manokana ho ahy mpanakanto," hoy Ramatoa Žvėrūna. “Fotoana nandinihana izany, fotoana ahafahanao mijanona misaintsaina lalina kokoa ny fiarahamonintsika sy ny anjara asan'ny zavakanto ao aminy. Ilay areti-mandringana dia nahatonga anay hahita fomba vaovao hiainana kolontsaina. Izany no antony mahaliana ity tetikasa ity: mandritra ny herinandro maromaro dia feno kanto vita amin'ny kanto ny takelaka. Hitako tsara izao fa ny te hahafanta-javatra sy traikefa vaovao dia manolo ny tahotra iraisampirenena amin'ny andro voalohan'ny valanaretina. "
Raha atambatra, mpanakanto 500 mahery no nanolotra ny sangan'izy ireo ho dinihina, ny ankamaroan'izy ireo tao anatin'ny 4 andro monja taorian'ny fanambarana. Ny zavatra hanaovana ilay fampirantiana dia nofidina arakaraka ny mason-tsivana maro: ny portfolio-n'ny mpanoratra, ny fahitana ny asa ary ny fampidirana azy amin'ny faritry ny tanàna. Ny komity mpifantina dia nanana tanjona ny hamorona fampirantiana izay maneho tsara indrindra ny zavakanto litoanianina amin'ny karazany rehetra.
Ny olom-pirenena sy ny vahinin'ny tanàna dia afaka mampiasa sari-tany virtoaly hitety ilay fampirantiana. Andriamatoa Kriščiūnas, izay mpanakanto manana talenta marobe, ao anatin'izany ny mozika, sary ary sary hosodoko, dia mihevitra fa ny fampirantiana "Art Needs No Roof" dia fomba iray tsara hijerena ny tanàna. Amin'ny maha mpanakanto azy dia fanta-daza amin'ny fahaizany manambatra ny kanto amin'ny asa sosialy izy. Tamin'ny taona 2019 dia nanao fametrahana «We are Kings of Garbage» amin'ny iray amin'ireo toeram-pivarotana lehibe. Ankehitriny Andriamatoa Kriščiūnas dia manolotra ny "Dia an-jato zavakanto zavakanto an-jatony" - fitsangatsanganana manodidina ny zavatra rehetra ao amin'ny "Art Needs No Roof", mitambatra fanatanjahan-tena sy ara-tsaina.
"Mety ho dia iray andro ny dia," - hoy ny fanazavany. “Ny andro toy izany dia afaka nanova ny fahitana ny tanàna. Heveriko fa varavarankely vaovao ho an'ny fon'ny mpijery ity tetikasa ity. Rehefa fampirantiana ihany no aseho ny zavakanto dia esorina tsy ho ao amin'ny fiarahamonina ireo mpanakanto: tsy ny rehetra no handray fotoana ho avy hijery ilay fampirantiana. Fa ny zava-kanton'ny "Art Needs No Roof" dia ho hitan'ny olona rehetra eny an-dalambe. "
Tsy ny fampirantiana irery no tanjon'ny fampirantiana. Amidy avokoa ny zava-kanto rehetra. Ny vidiny sy ny antsipirian'ny fifandraisan'ny mpanakanto dia mety ho hita ao amin'ny tranonkala manokana. Misy zavakanto an-jatony maro ao amin'ny tranonkala, anisan'izany ireo avy amin'ny fampirantiana an-kalamanjana.
"Elaela tsy nahazo niditra galeriana ny olona," hoy i Jolita Vaitkutė, mpanakanto tanora izay mety ho hita ao amin'ny tranonkala ny sangan'asany. "Mbola miatrika fanamby maro izahay, ary ny fampirantiana" Art Needs No Roof "dia manome fialantsasatra fohy. Tsy vitan'ny hoe manome fotoana ahafahan'ny mpanakanto mampiseho ny sangan'asany sy manatratra ny mpihaino izy io, fa fotoana iray ihany koa ahazoana aingam-panahy ho an'ny mpijery amin'ny sary mahafinaritra sy mampieritreritra ao anaty habaka tsy ampoizina. ”
Jolita Vaitkutė dia mampiasa sakafo sy zavatra hafa andavanandro ho an'ny fametrahana, fampisehoana ary sary. Ny asany dia misy ny fanehoana ny fisakafoanana an-kiran'ny baolina kitra Cristiano Ronaldo sy Lionel Messi vita tamin'ny zavatra 658, toy ny tiritra, patsabe, voaloboka, tsindrin-tsakafo ary zava-pisotro.
Manantena ny hanampy ireo mpanakanto hampivelatra ny mpihaino azy ireo mpiara-miombon'antoka mikarakara ny "Art Needs No Roof" ary hanokatra zava-kanto ho an'ny olom-pirenena sy ny vahinin'ny tanàna. Miaraka amin'ny fisokafan'ny sisintany ao anatin'ny EU, dia afaka idiran'ny mpitsidika vahiny i Litoania ary ekena ho iray amin'ireo toeran-kaleha azo antoka indrindra amin'ity fahavaratra ity.
Satria ny olona sy ny orinasa dia niharan'ny fatiantoka nandritra Covid-19 ny areti-mifindra sy ny quarantine dia nanjary fantatra tamin'ny firaisan-kina sy ny vahaolana vaovao i Vilnius. Nanome toerana malalaka ho an'ny daholobe ny tanàna mba hampiasana kafe fisokafana. Mannequins dia nameno habaka banga teo amin'ny latabatr'ireo trano fisakafoanana ary nampiasaina hanehoana ireo fanangonana mpamorona akanjo ao an-toerana. Vahaolana iray hafa ihany koa ny fampiasana takelaka fananganana tabilao hamoronana fampirantiana zavakanto malalaka eny afovoan-tanàna.
"Art Needs No Roof" dia haharitra telo herinandro, hatramin'ny 26 Jolay.